UNWTO Secretary General General: Ise fọdụrụ na ajụjụ ndị ọzọ maka Executive Council
Home » Njikọ Mkpakọrịta Akụkọ » UNWTO Secretary General General: Ise fọdụrụ na ajụjụ ndị ọzọ maka Executive Council
Nwere ike 10, 2017
Nhoputa ndi ochichi nke UNWTO ode akwukwo ohuru ka abali abuo gafere ma ndi ozo choro ugbua na abia nzuko Executive Council na Melia Castilla Hotel na Madrid. eTN kpọrọ ndị na-agụ akwụkwọ ka ha nye nzaghachi na echiche ha banyere onye kwesịrị iduzi ụlọ ọrụ njem nlegharị anya ụwa. Prọfesọ Geoffrey Lipman, Co-guzobere SUNx, na President Njikọ Aka nke Ndị Njem Nlegharị Anya nke Mba Nile (ICTP) zara.
Ihe o were:
Yabụ enwere 5 - Ajuju kariri Azịza maka UNWTO Executive Council mgbe ịtụ vootu na Secretary General ọhụrụ na Fraịde na Madrid.
(Mkpebi nke Prọfesọ Geoffrey Lipman kwuru)
Alain St. Ange gbara ọsọ maka mgbasa ozi siri ike maka Secretary General nke UNWTO. Ọ dabere na ikike ya ma ọ bụ ọhụụ ya, kama ọ bụ n'eziokwu, na nwa akwukwo ọzọ si Africa, Walter Mzembi nwere nkwado nke ndị otu African Union - nke ahụ gụnyere obodo Maazị St. Ange nke Seychelles.
Na njedebe, ọ bụ ihe na-ekpebi ihe, na ka agbụrụ ahụ gbadara waya ọ bụghị ihe ijuanya na nkwụsị niile pụtara. Ọ bụ ihe nwute bụ na ọhụụ St. Ange na nsogbu dịka ihu igwe, nchekwa ma ọ bụ obere agwaetiti, yana ike ya, ga-efu.
Mana mmadu ekwesighi ihie uzo nke ihu Mazị Mzembi nanị dị ka egwuregwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ọ bụ nwata ma bụrụkwa onye tozuru etozu n'okwute ndọrọ ndọrọ ọchịchị siri ike. O meela ọtụtụ ihe iji nwetaghachi mmụọ, ọhụhụ, na arụmọrụ nke njem nlegharị anya nke Zimbabwe: yana iwulite profaịlụ na njikọ aka nke mba Africa site na onye isi oche UNWTO Commission maka Africa ogologo oge. Ebumnuche ya maka UNWTO ka echebara echiche nke ọma, nwee obi ike, onye ọhụụ, mana n'otu oge ahụ dabara adaba na usoro nhazi nke nzukọ.
Ọ bụ ya mere o ji gosi ọkwa dị mma nke ukwuu. Onweghi onye nwere ike inwe obi abua na Africa ya na onu ogugu ndi mmadu na nsogbu ndi mmepe ga-enweta nkwado di ukwuu.
Ọ na-eche ndị iro siri ike ihu
Marcio Favilla bụ onye ndu njegharị na njem, nke jerela mba ya ozi dị ka osote Mịnịsta nke njem na mgbe ahụ dị ka onye isi Executive na UNWTO. Ọ bụ ezigbo mmadụ nke na-aghọta ohere na ihe ịma aka ndị na-eche nzukọ ahụ ihu n'oge oge a na-ejighị n'aka. Ọ bụ onye nyocha ma nwee ahụmịhe dị mkpa n'èzí. Usoro mmemme ya gosipụtara nke a. Dị ka ndị odeakwụkwọ ukwu abụọ gara aga, ọ nọrọla na ndu nke nzukọ ahụ ọtụtụ afọ. Atụmatụ ya nile ziri ezi na nkwa ya zuru ezu. Ọ bụ ezigbo aka aka.
The Dho / Vogeler tiketi bụ ihe ọhụrụ maka nzukọ a - ebe mmadụ abụọ jikọtara ọnụ iji kwado ike ha na nsogbu ha dịka ndị na-aga ime. Ọ bụ ihe anomaly. N'okwu nke Carlos Vogeler nanị na ọ nweghị ike inweta nkwado dị mkpa nke gọọmentị ya iji gbaa ọsọ maka ọrụ kachasị elu, ọ na-ekpuchikwa mpaghara ahụ dị ka Marcio Favilla. Na onye ndoro ndoro ochichi Onye nnochite anya Young Shim Dho enweghị nkwado ndọrọ ndọrọ ọchịchị mba ụwa chọrọ iji bulie mkpọsa siri ike. N'ihi ya echiche nke 2 maka otu. Usoro ihe omume ha na-akwado bu dika aturu anya ichebe ezi ihe nke ochichi di ugbu a site na iji nlezianya di n'ihu n'odinihu - haziri nke oma, haziri ya ma gosiputa ya oru
Enwere, okwu dị mma na nke na-adịghị mma n'echiche nke tiketi karịa mmadụ - omume na iwu, afọ, ahụmịhe, ndakọrịta, na nguzozi nke ndị aga-eme. Mgbe ahụ enwere okwu dị mgbagwoju anya nke ebe flagship ST-EP mmemme - ugbu a na Korea ọhụrụ dabere na International Organization iji jikwaa ya.
Mana n'ezie, lee, m ga-ekwupụta mmasị, ebe m tụụrụ ime ST-EP, ikekwe tupu oge ya eruo, dịka ụgbọ nnyefe MDG nke nwere atụ, na mmụọ nke SDG nke taa ... ..
N'ikpeazụ, e nwere ndị a na-amaghị ama.
Onye nnochite anya Zurab Pololikashvili agbaala ọsọ ndu ndu ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị egwu site na iji ịdị n’otu nke Europe na itinye aka nke Onye isi ala ya iji kwalite ọkwa ya. Usoro mmemme ya na nkwụsi ike dị n'elu ụdị mgbanwe nzukọ na-atụ anya na mkpa. Ọ na-elekwasị anya n'ihe ndị dị n'ime / mpụga dị ka ndị ọzọ na-azọ ọchịchị. Ya "glocal" na-elekwasị anya bụ ihe dị mkpa ude nke ịba ụba obodo mmetụta na njem ọdịnihu ..
Onye nnochite anya Jaime Alberto Cabal onye nnochite anya Colombia na Austria, onye gosiri onye isi ala ya na obodo ya ka ọ bụrụ onye na-akwalite ịzọ ọkwa ya na Latin America dị ka isi. ”Obodo Anglo-Saxon. Ndi isi ya na ndi oru aka ndi mmadu na ndi mmadu na-achikota ndi mmadu na ndi mmadu. Ọ na-agbanye bọtịnụ ụlọ ọrụ ziri ezi na nchekwa na nkwado, ọ ga-abụrịrị otu esi hụ omimi nke ọhụụ ya.
Ewezuga ajụjụ ndị ebilitere na ndị na-ebugharị mkpọsa a na-adọta, ezigbo ajụjụ bụ onye nwere obere amata oke na oke ọrụ UNWTO, yana mmekọrịta ụwa niile, ike, na adịghị ike, n'ezie na-ebugharị mgbanwe a na-akwado na oge na-ejighị n'aka.
Ma n'ezie, maka m, enwere m isi ajụjụ kpatara - nke otu n'ime ndị niile na-aga ime ya, na-amata n'ezie na ọ bụrụ na Mgbanwe Ihu Igwe bụ nke anyị ga-esi mee mgbanwe miri emi iji zaghachi eziokwu ahụ. Maka dị ka Naomi Klein si kwuo “Nke ahụ Na-agbanwe Ihe Nile”
Ajuju di otutu. Obi dị anyị ụtọ na anyị ga-amata azịza ajụjụ ndị a n'ọgwụgwụ nke izu.
Prọfesọ Geoffrey Lipman
Co-onye nchoputa SUNx,
president Njikọ Aka nke Ndị Njem Nlegharị Anya nke Mba Nile (ICTP)
Debe Safemụaka N'ebe nchekwa: akụkọ ịga nke ọma banyere ndu na njem nleta na-adigide
UNWTO kpọrọ President Costa Rica dị ka Onye Nnọchiteanya Pụrụ Iche nke Afọ Mba Nile nke Njem Nleta Na-aga n'ihu maka Mmepe